२०७५ जेठ १८ गते शुक्रवारको प्रतीक दैनिक
जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानको नागरिकतासम्बन्धी किचलो, अदालत र जिल्ला प्रशासनको मुख मिलेन
प्रस, वीरगंज, १७ जेठ/ २०६३ सालमा जन्मेको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका नागरिकका छोराछोरीले अहिले नेपाली नागरिकता नपाउँदा समस्या झेलिरहेका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकको हकमा उनीहरूले नागरिकता लिनुपूर्व जन्मेका छोराछोरीले अहिले नागरिकता नपाउँदा समस्या भएको हो । नागरिकता लिनुपूर्व जन्मेका छोराछोरीहरूले नागरिकता नपाउँदा अध्ययनमा समेत अप्ठ्यारो परेको छ । खासगरी भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा अध्ययन गर्न जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीले यो समस्या झेल्नुपरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साका सहायक प्रजिअ नेत्रप्रसाद शर्माले जन्मसिद्ध नागरिकता लिनुपूर्व जन्मेका छोराछोरीको हकमा कानूनमा व्यवस्था नभएको कारण नागरिकता दिने काम नभएको बताए । उनले यस सम्बन्धमा कानून बनाउनेतर्पm पहल भइरहेको र सम्भवतः एक वर्षमा यसको टुङ्गो लाग्ने बताए। जन्मसिद्ध नागरिकता लिएपछि जन्मेका छोराछोरीले सहज वंशजको नागरिकता पाइरहेको उनको भनाइ छ । नागरिकता लिनुपूर्व जन्मेका छोराछोरीको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले सिफारिस मात्र दिने गरेको बताए । तर नेपाल बाहिर अध्ययन गर्न पठाउने अभिभावकहरूले जि
प्रस, वीरगंज, १७ जेठ ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रले विश्व धूम्रपान निषेध दिवसको अवसर पारी जनचेतनामूलक चरित्र निर्माण चित्र प्रदर्शनी तथा विचारगोष्ठी मुरली बगैंचास्थित उपसेवा केन्द्रमा सम्पन्न गरेको छ । क्षेत्रीय निर्देशक ब्रह्माकुमारी ब्र.कु. रविना दिदीको सभाध्यक्षता तथा प्रजिअ लोकनाथ पौड्यालको प्रमुख आतिथ्य र प्रहरी उपरीक्षक रेवती ढकाल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक प्रेमध्वज शाह, राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रहरी उपरीक्षक टीकाप्रसाद पोखरेल, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य वीरेन्द्र यादव, रेडक्रस पर्साका उपाध्यक्ष मधु राणाको विशेष उपस्थितिमा पानसमा दिप प्रज्वलन गरी उुद्घाटन गरिएको कार्यक्रममा प्रजिअ लोकनाथ पौड्यालले समाजमा शान्ति सुव्यस्था र अमनचयन स्थापना गरी नागरिकलाई विकृति विसङ्गतिबाट मुक्त गराई सुरक्षित र स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापन गराउने प्रशासन र सुरक्षा निकायको अहम् जिम्मेवारी भएको बताउँदै यस कार्यमा ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवाकेन्द्रहरूबाट विभिन्न अवसरमा आयोजना गरिने यस्ता जनचेतनामूलक तथा आध्यात्मिक कार्यक्रमले निकै सहयोग पुग्नेहुदा यो निकै सराहनीय र सान्दर्भिक
मोदी भ्रमण पछिको नेपाल
ई. गोपाल श्रेष्ठ गत वैशाख २८ र २९ गतेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको नेपाल भ्रमणपछि नेपालमा अनेक किसिमको सकारात्मक र नकारात्मक टीका–टिप्पणी भयो । सकारात्मक टिप्पणीमध्ये नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनः उचाइमा पुग्यो, दिल्लीबाट काठमाडौं रेलमार्गद्वारा जोडिने सम्भावना बढ्यो, मेगा अरूण जलविद्युत् योजनाको शिलान्यास भयो, जनकपुर–अयोध्या सीधा बस सेवा चल्ने भयो, प्रदेश नं. २ ले १ अर्ब आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने भयो, मुस्ताड्ढो मुक्तिनाथले व्यापक प्रचार–प्रसार प्राप्त ग¥यो आदि । त्यस्तै नकारात्मक टिप्पणीमध्ये भारतले आप्mनो प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि आप्mनै सुरक्षा फौज पठाई नेपाली सुरक्षा व्यवस्थाको अवमूल्यन ग¥यो, भारतले तीन वर्ष पहिले नेपालमाथि गरेको नाकाबन्दीबारे स्वयंले गल्ती महसुस गरे पनि लिखित वा मौखिकरूपमा कुनै पनि प्रसङ्ग उठाएन । प्रधानमन्त्री मोदी धार्मिक गतिविधिमा लिप्त भएको देखेर राजनीतिमा धर्मले प्रवेश पाउने हो कि भन्ने शङ्कास्पद स्थितिको सिर्जना भयो, आदि । नेपाल–भारत सम्बन्धको उतार–चढाव त छँदैछ, सीमा विवाद कहिल्यै नसकिने मुद्दा बनेको छ भने सन् १९५० को सुगौली स
वित्तीय हस्तान्तरणसहितको संघीय बजेट
शीतल महतो आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ का लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूर्ण आकारको सङ्घीय बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । नेपालको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम उनले मङ्गलवार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा चार किसिमका वित्तीय हस्तान्तरण हुनेगरी बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सङ्घीय वित्त व्यवस्था अनुसार सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले समानीकरण र सशर्त अनुदान गरी कुल रू तीन खर्ब आठ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख वित्तीय हस्तान्तरण गरेका छन् । तीमध्ये प्रदेशका लागि रू एक खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड ४१ लाख तथा स्थानीय तहका लागि रू एक खर्ब ९५ अर्ब पाँच करोड ३१ लाख वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । सङ्घीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण र सशर्त अनुदान सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अलग–अलग नै अन्तर्सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् प्रदान गरेको छ भने समपूरक र विशेष अनुदान चाहिं शून्य ब्यालेन्समा बजेटिङ गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहले पहिचान गरेको क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूका लागि समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन तथा प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट
कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्ने कि ?
सञ्जय साह मित्र बजेट आएको छ । वर्तमान पुस्ताका नेपाली नागरिकले देखेका सम्पूर्ण सरकारहरूमध्ये वर्तमान सरकार शक्तिशाली छ । शक्तिशाली सरकारले ल्याएको यस बजेटलाई शक्तिशाली बजेट मानेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत भएपछि यसको निकै सकारात्मक चर्चा भएको थियो । नीति तथा कार्यक्रमले धेरैमा आशा जगाएको थियो । देशले धेरै थोक पाउँदैछ भन्ने सबैलाई लागेको थियो । हरेक वर्गले निकै धेरै आशा र अपेक्षा नगरेको भए पनि आउँदो बजेटप्रति आशान्वित नहुने वर्ग भने थिएन । आशाले मानिसलाई सकारात्मक दिशामा जीवनको गति बढाउन सहयोग गर्दछ । आशाविहीन जीवनलाई कतिपयले मृत्युसमान मानेका छन् । त्यसै पनि देशमा आशावादीहरूको प्रचण्ड बहुमतको सरकार छ । अर्थात् देशका वर्तमान मतदाताहरूले आगामी पाँच वर्षका लागि आशा त गरेकै छन् । नागरिकका आशा र भरोसाका दुई कारण थिए – एक, दुई ठूला वामपन्थी दलहरूको एकता र दुई, चुनावको समयमा दुई दलका प्रमुख नेताहरूले गरेको भाषण । दुई ठूला वामपन्थी दल एक भएर चुनाव लडेका थिए । चुनावमा गठबन्धन गरेका थिए । गठबन्धनको एउटा घोषणापत्र थियो । घोषणापत्र निकै आकर्षक
शहीदको मान राखौं
संविधान जारी भएपछि तीन तहको निर्वाचन भएको आठ महिना बढी हुन थाल्यो । निर्वाचन ताका चुनावमा धेरै कुराको वाचा गरिएको थियो । कतिपयले वाचा सम्झेर दायित्व निर्वाह गर्दैछन् र गर्ने क्रममा छन् भने केही अब जे हुन्छ अर्काे चुुनावमा हुन्छ भनेर आपूmखुशी गर्दैछन् । वीरगंजका मेयर विजय सरावगी र मुख्यमन्त्री लालबाबू राउतले शहीद पत्नीलाई रोजगार दिलाएर चुनावी घोषणापत्र बमोजिम काम गरेको दाबी गरेका छन् । मेयर र मुख्यमन्त्री दुवैले शहीद परिवारलाई दिएको जागिर स्थायी होइन । उनीहरूलाई करारमा नियुक्त गरिएको हो । करारको रोजगार दीर्घकालका लागि पक्कै होइन । उनीहरूलाई तत्काल अन्य तरिकाबाट रोजगार दिने उपाय नबनेपछि करारको बाटो रोजिएको हो । करार सेवा निश्चित अवधिका लागि हुन्छ, बढीमा एक वर्ष । यो सेवा अवधि मेयर र मुख्यमन्त्री रहुन्जेल थप गर्न सकिए पनि त्यसपछिको अवस्थामा पुनः समस्या आउन सक्छ । यस अर्थमा करारमा जागिर दिएको कुरालाई शहीद परिवारको नाम उल्लेख गरेर डम्पूm पिट्नुको अहिले खासै अर्थ नहोला । जुन दिन शहीद परिवारका सदस्यले सरकार र प्रदेश सरकारको स्थायी जागिर पाउँछन्, उनीहरूको भविष्य बन्ने सानो आशाको किरण द
२०७५ जेठ १७ गते बिहीवारको प्रतीक दैनिक
ध्वनि प्रदूषण फैलाउने उद्योगलाई महानगरको साथ
प्रस, परवानीपुर, १६ जेठ/ वीरगंज महानगरपालिकाभित्र ध्वनि प्रदूषण पैmलाउने उद्योगलाई नगरपालिकाले नै संरक्षण गर्न थालेको आरोप लागेको छ । नगरवासीले ध्वनि प्रदूषण रोक्न तथा त्यस्ता उद्योग अन्यत्र सार्न उजुरी गर्दा समेत हालसम्म कुनै कारबाई नगरपालिकाले नबढाएको वीरगंज–११ श्रीपुरका सञ्जीत साहले गुनासो गरे । उनले बसोवास गर्ने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय अगाडिको टोलमा ओम पूmटवेयर इन्डस्ट्रीज सञ्चालन हुँदा वातावरणमा नकारात्मक असर परेको भन्दै उद्योगको अनुगमन गरी ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण र उद्योग सार्न फागुन ३० गते महानगरपालिकाको सरसफाइ शाखामा उजुरी गरेका थिए । सो टोलका करिब एक दर्जन टोलवासीले लिखित उजुरी गर्दासमेत हालसम्म उद्योगजन्य ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण वा उद्योग सार्न कुनै पहल नभएको टोलवासीको गुनासो छ । यस विषयमा उद्योग सञ्चालक ओमप्रकाश महतोसँग कुरा गर्दा उनले २०५२ सालदेखि घरेलु तथा साना उद्योगबाट स्वीकृति लिएर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको र कर तिर्दै आए तापनि छिमेकीहरूmे डाहाले त्यस्तो उजुरी गरेको बताए । उनले नगरपालिकाले अनुगमन गरिसकेपछि जे सुझाव दिन्छ, त्यसगरी उद्योग सञ्चालन
प्रजिअ पौडेलले क्षमा मागे
प्रस, वीरगंज, १६ जेठ/ पर्साका प्रजिअ लोकनाथ पौडेलले सञ्चारकर्मीहरूसँग क्षमा मागेका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ, पर्सा शाखाको अगुवाइमा प्रजिअ पौडेलले आपूmले सम्पूर्ण पत्रकारहरूको मानमर्दन हुनेगरी अभिव्यक्ति नदिएको र त्यस्तो पर्न गएको भए क्षमाप्रार्थी छु भनेर क्षमा मागेका थिए । पत्रकार प्रणय साहलाई समाचार सङ्कलन गर्ने क्रममा जेठ १४ गते प्रजिअ पौडेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा अपशब्द प्रयोग गरी दुव्र्यवहार गरेका थिए । साथै उनले सबै पत्रकारहरूको मानमर्दन हुने भाषा प्रयोग गरेकोमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ, पर्साको आज प्रजिअसमक्ष डेलिगेसन गएको थियो । पत्रकार महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य महेश दास, प्रदेश उपाध्यक्ष केसी लामिछाने, शाखा अध्यक्ष श्याम बन्जाराले प्रजिअ पौडेललाई आप्mनो आचरणमा सुधार ल्याउन र परिवर्तित समय अनुसार सञ्चारकर्मीलगायत सम्पूर्णसँग व्यवहार गर्न सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले कसैको मानमर्दन हुनेगरी काम भए पत्रकार महासङ्घ चुप लागेर नबस्ने चेतावनी पनि दिएका थिए ।
उडानको सय दिन
विनोद गुप्ता ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा दिएर वाम गठबन्धनको सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ । संसद्मा सिटको सङ्ख्या र त्यसपश्चात् भएको पार्टी एकीकरणपछि नेपालमा स्थिर सरकारको सुनिश्चितता भएको छ । यो सरकारलाई समर्थन गर्ने मधेसवादी दलहरू राजपा र फोरम भने पटक–पटकको वार्तापछि पनि, मधेसको मुद्दामा सत्ता पक्षबाट संशोधन हुने कुरामा विश्वस्त भइसकेकाले सरकारमा सामेल हुन भने सकेका छैनन् । यद्यपि उनको सरकारमा सामेली वा प्रतिपक्षमा बस्दाको अवस्थाले सरकारको स्थायित्वमा कुनै असर परिहाल्ने देखिंदैन । सुशासन र भ्रष्टाचारको लागि शभचय तयभिचभलअभ को नीति अँगालेको सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न सक्नुलाई यसको सफलताको रूपमा लिनुपर्दछ भने यसबाट सरकारले पाउनुपर्ने श्याबासी यातायात विभागका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईको सरुवाको कारण पाउन सकेन । सिन्डिकेट तोड्ने उनको अथक प्रयत्नलाई सरकारले दण्डित गरेको आभास भयो जसबाट झन्डै ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वर्तमान प्रमुख कुलमान घिसिङसँग गरेको व्यवहारको सम्झना गरायो । यस्तै वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा भएको केही निर्णय, त्रिभ
बजेटले ल्याएको तरङ्ग
सरकारको बजेट प्रत्येक वर्ष आउँछ । प्रत्येक वर्ष सत्तापक्ष्Fले त्यसको बडाइ गर्छ र प्रतिपक्ष्Fले आलोचना गर्छ । बजेटमा नराम्रो कुरा भए पनि सत्तापक्षले बडाइ गर्छ भने राम्रै कुराको पनि सत्तापक्षले आलोचना गर्छ । त्यही वा त्यस्तै प्रकारको बजेट आज प्रतिपक्षमा बसेको दल सत्तामा पुगेर प्रस्तावित गरेको छ भने, फेरि एउटाले विरोध र अर्कोले समर्थन गर्ने गरेको देखिन्छ । यसबाट जनतामा नेपालका अर्थविद्हरु कि विषय नजान्ने र नाममात्रका विज्ञ हुन् वा घोर प्रतिशोध र पूर्वाग्रहले ग्रस्त छन् भन्ने कुरा देखाउँछ । जनताको नजरमा राम्रो कुरा राम्रो हो र नराम्रो चाहिं नराम्रो नै । हिजोको कुरा छाडौं, आजको बजेट भने ऐतिहासिक हो, यो यस मानेमा कि यो सङ्घीय गणतन्त्रको पहिलो बजेट हो । यसमा सरकारले कुन योजनामा कति खर्च गर्ने, कुन नयाँ योजना अघि सार्नेभन्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई सङ्घात्मकताको अनुभूति दिने गरी बजेटको बाँडफाँड भएको छ कि छैन, भएको छ भने त्यस तहमा आर्थिक अनियमितताको अनुगमनको के व्यवस्था छ, प्रमुख कुरा हुन आउँछ । किनकि अब सङ्घीय सरकार (केन्द्र सरकार) ले गर्ने भनेको राष्ट्रिय योजनाहरुको कार्यान्वयन मात्र
२०७५ जेठ १६ गते बुधवारको प्रतीक दैनिक
११ औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रभातफेरी, गणतन्त्र सुदृढ गर्ने जिम्मेवारी सबैको– मुख्यमन्त्री
प्रस, वीरगंज, १५ जेठ/ प्रदेश नं. २ सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रभातफेरी निकालेको छ । शहीदहरूको बलिदानका कारण देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको दिनको सम्झना गर्दै आज ११ औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रदेश नं. २ सरकारले जानकी मन्दिरबाट प्रभातफेरी निकालेको थियो । प्रभातफेरि रामानन्द चोक, पिडारी चोक हुँदै जनकपुर चुरोट कारखानास्थित कभर्ड हलमा पुगेर समापन भएको थियो । समापन कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री लालबाबू राउतले शहीदहरूको बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्र अझ सुदृढ भएर लैजाने जिम्मेवारी सबैमा रहेको बताए । उनले सो अवसरमा गणतन्त्रका प्रथम अभियन्ता स्व. रामराजाप्रसाद सिंहलाई स्मरण गर्दै गणतन्त्र प्राप्तिका लागि बलिदान दिने सबै ज्ञात–अज्ञात शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेका थिए । मुख्यमन्त्री राउतले २००७ सालको क्रान्तिदेखि विभिन्न चरणको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, मधेस विद्रोहको जगमा मुलुकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुखानुभूति गरिरहेको बताए । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभासद्, उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश, प्रदेश सरकारका सचिव, सुरक्ष्Fा निकायका प्रमुख
नाम, केन्द्र परिवर्तनको लागि सिफारिस
प्रस, वीरगंज, १५ जेठ/ गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले तय गरेका ४५ स्थानीय तहले केन्द्र, नाम र सिमाना हेरफेरको काम गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको वर्ष दिन पुग्दा ८५ ले परिवर्तन गरिसकेका छन् भने ४५ को लागि गाउँसभा र नगरसभाबाट पारित गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गाउँसभा र नगरसभाबाट निर्णय गरेर सङ्घीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयमा गापा र नपाको सिमाना तथा केन्द्र हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था अनुरूप बहुमतका आधारमा यस्तो सिफारिस गरिएको हो । स्थानीय सरकार गठन भएको ६ महिनाभित्र यस्तो परिवर्तन गर्न सकिने प्रावधान अनुरूप रौतहटको यमुनामाई, पर्साको ठोरी, कालिकामाई गापाले पनि केन्द्र परिवर्तनको लागि सिफारिस गरेका छन् । पर्साको छिपहरमाई गापा, विन्दवासिनी, रौतहटको दुर्गाभगवतीले केन्द्र परिवर्तनको लागि सङ्घीय सरकारलाई परिपत्र गरेको छ । यसैगरी नाम परिवर्तनमा पर्साको पटेर्वा सुगौली रहेको छ । नाम र केन्द्र दुवै परिवर्तन गर्ने पर्साको सखुवा परसौनी गापाले पहल गरेको छ ।
सरकारी कागज किर्ते गर्ने दुई पक्राउ
रवीन्द्र साह, कलैया, १५ जेठ/ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाराले सरकारी कागज किर्ते गरेको कसूरमा दुईजनालाई थुनामा राखेर कारबाई शुरु गरेको छ । पचरौता नपा–४ मा रहेको २ कठ्ठा ५ धुर सार्वजनिक जमिन सरकारी कागजातमा किर्ते हस्ताक्षर, छाप प्रयोग गरेर व्यक्तिको नाममा गरेको कसूरमा प्रहरीले बृजमोहन साह र प्रद्युम्न साहलाई पक्राउ गरेको बारा प्रहरीका प्रवक्ता प्रनाउ रञ्जित सिंह राठौरले बताए । पक्राउ परेका साहद्वयलाई बारा जिल्ला अदालतबाट सात दिने म्याद थप गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता राठौरले जानकारी गराएका छन् ।
रक्सौल क्षेत्रका कुख्यात अपराधी नेक महम्मद पक्राउ
प्रस, वीरगंज, १५ जेठ/ रामगढवा प्रहरीले अपराधमा कुख्याती कमाएका नेक महम्मदलाई रामगढवाबाट पक्राउ गरेको छ । विभिन्न व्यक्तिहरुलाई डर, धम्की, त्रास दिएर रङ्गदारी असुली गर्नुको साथै हत्यामा समेत संलग्न रहेका नेक महम्मदलाई रामगढवाबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । नेक महम्मद पक्राउ परेको समाचारले रक्सौलका व्यापारीहरू खुशी भएका छन् । प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार आदापुरका शिक्ष्Fक चैन साहलाई गोली हानी हत्या गरेको आरोपका साथै नेक महम्मदमाथि रामगढवाको आमोदेई पैक्स अध्यक्ष मोतीउर रजा र रक्सौलका चिकित्सक राजीव रञ्जनसँग १० लाख रङ्गदारी माग गरेको उजुरी छ । यसको अलावा आदापुरका एक दर्जनभन्दा बढी व्यवसायीले नेक महम्मदविरुद्ध रङ्गदारी माग गरेको भनी उजुरी गरेका थिए । रक्सौल प्रहरीको लागि टाउको दुखाइ बनेका नेक महम्मदको खोजी बिहार र राजकीय रेल प्रहरीले पनि गरिरहेको थियो । नेक महम्मदमाथि रक्सौल रेल थाना अध्यक्ष अनिल कुमारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको आरोप छ । यस अघि नेक महम्मद सुगौली विस्फोटकाण्डमा प्रहरीलाई अल्मल्याएर दिएर भाग्न सफल भए पनि आज रामगढवामा पक्राउ परेका हुन् ।
श्रीमन्नारायण २४० वर्ष पुरानो राजसंस्था भएको देश नेपालमा गणतन्त्र स्थापित भएको एक दशक पूरा भएको छ । दश वर्ष अघि देशमा गणतन्त्र स्थापना हुँदा जुन उत्साह, उमङ्ग, हर्ष एवं उल्लास नेपाली जनतामा कायम थियो त्यसमा कमी आएको छैन । गणतन्त्रप्रतिको आस्थामा कमी आएको छैन, तर गणतान्त्रिक मुलुकका जनताको जनजीवनमा जुन परिवर्तन आउनुपर्ने थियो त्यो आउन सकेको छैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको एक दशकको लामो यात्राको चित्रण गर्दा हामी कतिपय उपलब्धि गिन्ती गराउने अवस्थामा अवश्य पनि आइसकेका छौं, तर यसबाट सन्तुष्ट हुन सक्दैनौं । गणतन्त्रको अर्थ राजाको ठाउँमा राष्ट्रपतिको बहाली अवश्य होइन । शाब्दिकरूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने गणतन्त्र भनेको ‘गण’ तथा ‘तन्त्र’ अर्थात् ‘समूह’ को शासनलाई मात्रै हामी गणतन्त्रको संज्ञा दिन सक्दछौं । दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतमा देश अङ्ग्रेजहरूको पञ्जाबाट मुक्त भई स्वाधीन घोषित भएको दिनलाई स्वतन्त्रता दिवसको रूपमा अवश्य पनि मनाउँछन् तर त्यसलाई गणतव्य दिवसको रूपमा मनाउने गरिंदैन । भारतमा त्यहाँको संविधान जारी भएको वर्ष र मिति सन् १९५० को जनवरी २६ लाई गणतन्त्र दिवसको
शासन कडै हुनुपर्छ
शासन कडा हुनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य एकाधिकारवादी शासनसत्ताको वकालत होइन । सत्ता त जनताको इच्छानुसार, जनताका लागि र जनताद्वारा नै सञ्चालित सर्वोत्तम हो, तर हाम्रोजस्तो मुलुक, जहाँ शिक्षाको कमी छ, मानिसमा वैचारिक परिपक्वता आइसकेको छैन, विरोधलाई नै श्रेष्ठताको कसी मानिन्छ, त्यस ठाउँमा शासन कडा हुनैपर्छ । अधिकार र कानूनप्रदत्त सुविधाको फाइदा उठाउँदै कुनै पेशागत समूहले आप्mनो स्वार्थ पूरा हुने खालको सङ्गठन खडा गर्दछ, त्यहाँसम्म ठीक छ, तर त्यसै सङ्गठनको आड लिएर सामान्य जनताको अधिकारको हनन र आप्mनो मनपर्दो गर्न खोज्दछ भने त्यहाँ शासन कडा बन्नैपर्दछ । अन्यथा समूहको अगाडि व्यक्ति जहिले पनि कमजोर बन्छ र प्रजातन्त्रको अर्थ शक्तिशालीको रजाइँ भन्ने लाग्न थाल्छ । नेपालमा आज त्यस्तै भइरहेको छ । शिक्षकहरूको सङ्गठन छ, उनीहरू बलिया छन्, पढाऊन् नपढाऊन् उनीहरूविरुद्ध कारबाई गर्न सकिन्न किनकि कारबाई ग¥यो कि देशभरिको शिक्षा प्रणाली ठप्प हुन्छ । ठेकेदारहरूको सङ्गठन छ, उसले काम गरोस् नगरोस् कारबाई गर्न पाइन्न, तुरुन्त सङ्गठन खडा हुन्छ । यातायात व्यवसायीहरूको सङ्गठन छ, आपूmखुशी गर्छन्, यात्रु मारमा पर्छन् ।
२०७५ जेठ १५ गते मङ्गलवारको प्रतीक दैनिक
ड्राईपोर्टबाट छुटने ट्रकको माल बाटैमा हिनामिना, १०० बोरा पिना जीतपुरमा बरामद
प्रस, परवानीपुर, १४ जेठ/ सुक्खा बन्दरगाहबाट समान लिएर नेपालको अन्य ठाउँको लागि छुट्ने ट्रकबाट मालसमान हिनामिना हुने गरेको एउटा घटना सार्वजनिक भएको छ । वीरगंजका व्यवसायी सुरेश रूंगटाको मालसामान हिनामिना भएको हो । ड्राईपोर्ट सञ्चालक कम्पनी हिमालयन टर्मिनल प्रालि र ढुवानीकर्ता ट्रक चालकको मिलोमतोमा लाखौको माल हिनामिना गरिएको घटना बारा प्रहरीले पत्ता लगाएको छ । बारा प्रहरीले ड्राइपोर्टबाट हिजो पिना लोड गरी छुटेको ना ४ ख ४४९८ र ना. ४ ख ५०९८ नं को दुईवटा ट्रकमा कुखुराको दाना बनाउन भटमासको पिना बोकी विराटनगरको लागि हिडेको थियो । एउटा गाडीमा २० टन माल लोड गरेको तर ड्राईपोर्टको काटाले १७ टन माल मात्र बोकेको छुट पुर्जी दिएको थियो । ट्रक चालकले बाटोमैं गाडी रोकेर पुर्जीभन्दा बढी तीन टन पिना झिकेर भण्डारण गरेको अवस्थामा बारा प्रहरीले १०० बोरा पिना बरामद गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जीत सिंह राठौरले जानकारी दिएका छन् । जीतपुरसिमरा–७ का गङ्गा साहको सटरभित्र १०० बोरा र वीरगंज बाइपास सडकखण्ड प्रतिमा चोक नजिक रेनुका पेट्रोल पम्प नजिकबाट एउटा ट्रकको माल बरामद गरिएको बताए । यस विषयमा
सिडियोले थर्र्र्काए पत्रकारलाई
प्रस, परवानीपुर, १४ जेठ/ पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकनाथ पौडेलले पर्साका पत्रकार प्रणयकुमार साहलाई अपशब्द बोल्दै थर्काएको आरोप लागेको छ । घटना विचार साप्ताहिक र पब्लिक एफएमका संवाददाता पत्रकार साहलाई प्रजिअकै कक्षमा प्रजिअ पौडेलले अपशब्द बोल्दै थर्काएको आरोप लगाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साको चर्पी किन दुर्गन्धित भयो, यसबारे प्रतिक्रियाको लागि प्रजिअ कहाँ पुगेका पत्रकार साहलाई प्रजिअ पौडेलले सबै पत्रकार दलाल हुन् र पैसाका लागि अन्यत्रबाट परिचालित भएर अरूको खेदो खन्छन् भन्दै प्रतिक्रिया दिन आनाकानी गर्दै थर्र्काएर कार्यालयबाट भगाएको पत्रकार साहले गुनासो गरे । यस विषयमा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकनाथ पौडेलसँग बुझ्दा सामान्य मिसअन्डरस्ट्याडिंग मात्र भएको बताए । सामान्य विवाद भएको हो, कुरा मिलिसकेको छ, उनले भने । आपूmले अपशब्द प्रयोग नगरेको र गलत किसिमको आरोप लगाएर बदनाम गर्ने काम भएको दाबी गरे ।
पोखरिया विद्युत् केन्द्रबाट रु ४४ लाख असुली
प्रस, पोखरिया, १४ जेठ/ विद्युत् वितरण केन्द्र पोखरियाले बक्यौता असुल गर्न र लाइन काट्न थालेपछि अहिले आज एकै दिनमा २४ लाख रकम असुल भएको छ । सो केन्द्र अहिलेसम्म रु ४३ करोड ३२ लाख बक्यौता रहेको कार्यालय प्रमुख सुदीपराय यादवले जानकारी गराएका छन् । हिजोदेखि लाइन काट्न थालेपछि स्थानीयले आज बिहानदेखि रकम बुझाउन थालेको प्रमुख यादवले बताए । २८ लाखभन्दा माथि बक्यौता रहेको ४० जना ग्राहकको पहिलो चरणमा लाइन काट्ने र सोही अनुरूप पोखरिया नगरपालिका र जिल्ला अस्पताल पोखरियाको लाइन काटिएको प्रमुख यादवले बताए । केही रकम बुझाएको र बाँकी रकम असार मसान्तसम्म बुझाउन लिखित सहमति भएपछि लाइन जोडिएको उनले बताए । लेखापाल भूपि चौधरीका अनुसार सो केन्द्र अन्तर्गत ४३ हजार ५ सय ग्राहक छन् र १५ दिनभित्र बक्यौता रकम नबुझाउने ग्राहकलाई कालो सूचीमा राखी सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए ।
स्थानीय न्यायिक समिति ः अवसर र चुनौती
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव २०४७ र २०६३ को संविधानले राज्यको तेस्रो अङ्ग न्यायपालिकालाई तीन तहमा राखे पनि वर्तमान संविधानले चार तहमा बनाएको छ । स्थानीय निकायहरूमा रहेको न्यायिक समिति, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालत गरी चार तहको अदालत छ । जुन आम जनताको लागि न्यायमा पहुँचको दृष्टिले सकारात्मक हो । देवानी प्रकृतिको सानोतिनो विवादको लागि पनि पहिले दूरदराजको सदर मुकाम पुग्नेपर्ने बाध्यतालाई सहज पार्दै हरेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा न्याियक समिति बनाइएको छ । जसले छिटो–छरितो र सस्तो एवं जीत–जीतको अनुभूति गराउने र फैसलामा अपनत्व स्थापित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । छिटोछरितो र सस्तो यस मामलिा कि अदालतमा जति धन, समय र श्रम खर्च हुँदैन । स्थानीय न्यायिक समितिलाई निर्णय गर्नुभन्दा मेलमिलाप गराउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने प्राथमिकता कानुनले दिएको छ । कानुनले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारलाई दुई प्रकारले व्यवस्था गरेको छ । एउटा, निर्णय गर्न सक्ने विवाद र अर्को, मेलमिलापमा पठाउन सक्ने विवाद । आली–धुुरी, बाली नोक्सान, इज्जत आमद अनुसार खान लाउन नदिएको, जेष्ठ नागरिकको समस्या, महिला
व्यवस्था कुनै पनि समग्रमा नराम्रो हुँदैन, न कुनै व्यवस्था समग्रमा राम्रो नै हुन्छ । प्रत्येक शासन व्यवस्थामा केही न केही त्रुटि हुन्छ । जब त्रुटिहरूको भरमार लाग्न थाल्छ, शासन व्यवस्था परिवर्तनको माग उठ्न थाल्छ । यस क्रममा विद्रोह हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ, कहिलेकाहीं क्रान्ति पनि हुन्छ । यसरी सङ्घर्ष गरेर स्थापित व्यवस्था निष्कलङ्क त नभनौं, अधिसङ्ख्य अवस्थामा निर्दोष हुन्छ । त्यसले जनताको जीवन शैलीमा सुधार ल्याउँछ, देशको विकासको गतिलाई तीव्रता दिन्छ, न्याय सम्पादन सहज र सरल हुन्छ । शासन व्यवस्थाको सरल र सोझो परिभाषा भनेको हिजोको समस्त विसङ्गति र विषमताहरूको नाश हुनु हो । हिजो भ्रष्टाचार थियो, आज हुनुहुँदैन, हिजो निर्माण विकासको काममा गुणस्तर थिएन, कार्य सम्पादन विलम्बगरी हुन्थ्यो, आज गुणस्तरयुक्त र निर्धारित समयमा हुनुपर्छ । हिजो न्याय थिएन वा ढिलो हुन्थ्यो आज त्वरित न्याय अपेक्ष्Fित हुनुपर्छ । हिजो कामै नगरे पनि हुन्थ्यो, जे मन लाग्यो त्यही गरे हुन्थ्यो, आज काम गर्नुपर्छ र जन अपेक्षा अनुसार हुनुपर्छ । हिजो ठूला तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू जनताभन्दा ठूला थिए, आज समतापूर्ण भावयुक्त हु
२०७५ जेठ १४ गते सोमवारको प्रतीक दैनिक
स्थानीय तहमा व्यापक भष्ट्रचार, बाँडीचुँडी सबैले रकम सिध्याउँदै
प्रस, वीरगंज, १३ जेठ/ पर्साका स्थानीय तहहरूमा अहिले व्यापक भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । विरोधी पक्षका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले हिजोसम्म गाउँसभा गर्न दिएका थिएनन्, अहिले भने सबै रकम बाँडफाँड गरी खाने गरेको पाइएको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा बहुमत छैन, तर खर्च निर्विवाद भइरहेको छ । कसैले अहिलेसम्म विवाद गरेको छैन । स्थानीय तहमा विवादका कारण समयमा गाउँसभा हुन नसक्दा गाउँपालिकाको कामकाज पनि ढिलो शुरु भएको थियो । धोबिनी गाउँपालिका अध्यक्ष्F नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भए पनि बहुमत सङ्र्घय समाजवादी फोरमको छ । गाउँसभा गर्न पटकपटक समय तोकिए पनि बहुमत नपुग्दा बस्न सकेको थिएन । जगरनाथपुर गापामा नेकपा माओवादी केन्द्रको गाउँ अध्यक्ष रहे पनि बहुमत फोरमको छ । सो गापामा पनि लामो समय विवाद चलेको थियो । त्यसैगरी कालिकामाई गापामा सङ्घीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष्F छन् भने बहुमत अन्य पार्टीको छ । त्यहाँ पनि ठूलो विवाद भएको थियो । हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार विकास निर्माणमा २०/३० प्रतिशत, लक्षित वर्गका लागि आएको सामाजिक विकासमा ५० देखि ६० प्रतिशत, कार्यालय सञ्चालन तथा अन्य सामा
पूर्व मन्त्री शाहको पहलमा अनुगमन, कछुवाको चालमा ठेकेदारहरू निर्माण कार्य गर्दै
प्रस, रौतहट, १३ जेठ/ रौतहट जिल्लाका विभिन्न नगरपालिकामा विभिन्न निकायद्वारा सञ्चालित निर्माण कार्यको आज अनुगमन तथा निरीक्षण भएको छ । पूर्वमन्त्री प्रभु साह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल, जिल्ला वन अधिकृत दीर्घनाथ कोइराला, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयका इन्जिनियर, सडक डिभिजनका इन्जिनियर श्याम मिश्र, जिल्ला समन्वय समितिका प्राविधिक, पत्रकारलगायत भद्र भलाद्मीहरूको टोलीले आज देवाही गोनाही नगरपालिका , मौलापुर नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिकामा भइरहेको निर्माण कार्यलाई प्राभवकारी र पारदर्शी बनाउन अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको हो । सडक डिभिजन, सिंचाइ, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, जिल्ला समन्वय समिति, वन कार्यालयलगायतले नगरपालिकामा कुन योजना सञ्चालन गरेकोबारे सो टोलीले जानकारी लिएको थियो । सडक डिभिजन, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण तथा शहरी विकास कार्यालयबाट लिएको ठेक्का टेन्डरको काम कछुवाको चालमा भइरहेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । देवाही गोनाही र मौलापरबीच रहेको बाँध गत साउन महिनामा आएको बाढीले भत्काएकोले निर्माण नभए बस्ती ढुवानमा पर्ने खतरा रहेको बताइएको थियो
केटाकेटीहरू किन सिक्दैनन्
अनन्तकुमार लाल दास पाठ्यक्रम एउटा केकको अवधारणामा तयार गरिन्छ । मान्यता के भने पोस्ट ग्रेजुएट गर्ने केटाकेटीहरूमा वर्तमानमा यति ज्ञान हुनुपर्छ । केकजस्तै त्यस ज्ञानलाई कक्षागतरूपमा टुक्रा गरी पहिलो कक्षासम्म लिएर गइन्छ । शिक्षकको एक मात्र काम वर्षमा पाठ्यक्रम पूरा गरेर परीक्षा लिनु हो । यस कक्षागत भ¥याङजस्तै प्रक्रियाबाट त्यस्ता केटाकेटीहरू अलग्ग हुन्छन् जो कक्षामा नियमित उपस्थित हुँदैनन् वा उपस्थित भए तापनि नीरस शिक्षण विधिले गर्दा दिमागीरूपले कक्षामा अनुपस्थित हुन्छन् । यस कारण कक्षामा एकपटक फेल भएपछि धेरै केटाकेटी शिक्षा प्रणालीबाट सधैंका लागि बाहिरिन्छन् । हाम्रो देशमा मात्र होइन, अन्य देशहरूमा पनि यसको सबैभन्दा सजिलो उपाय के खोजियो भने कुनै पनि कक्षामा कसैलाई फेल नगर्ने । पास– फेलको मनोवैज्ञानिक दबावबाट मुक्तिको व्यावहारिक प्रयोग के भयो भने बेगर योग्यता उनीहरूलाई एक कक्षाबाट अर्को कक्षामा बढाउन र पढाउन थालियो । अब के देखियो भने केटाकेटीहरू तल्लो कक्षाबाट सिकेर आउँदैनन् । निजी विद्यालयहरूले यसलाई चुनौतीको रूपमा लिई विशेष कार्ययोजना अनुसार पढाउन थाले र आपूmमा जिम्मेवारी बो
अन्योलमा न्यायिक समिति
नेपालको संविधान ०७२ ले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा न्यायिक अधिकारको पनि व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा रहेका महानगरपालिका, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका उपमेयरको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनाएर देवानी मुद्दा अन्तर्गतका केही मुद्दा अदालत सरह नै छिनोफानो गर्ने अधिकार दिएको छ । अदालतसम्म जान नपरोस् र गाउँटोलको विवाद त्यहीं समाधान होस् भन्ने अभिप्रायले स्थानीय तहलाई केही न्यायिक अधिकार प्रत्योजन गरिए पनि अहिलेसम्म स्थानीय निकाय गठन भएको आठ महिनाको अवधिमा न्यायिक समिति नै आप्mनो काम, कर्तव्य र अधिकारबारे अनभिज्ञ भएको कारण कार्य सञ्चालन गर्न सकेको पाइएको छैन । न्यायिक समितिलाई देवानी प्रकृतिका मुद्दामा आली धुर, गौचरन, निकास, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकाको भरणपोषण, लेनदेनमा २५ लाखसम्मको उजुरीको छिनोफानो गर्ने अधिकार छ । तर न्यायिक समितिका सदस्यहरू नै आप्mनो काम, कर्तव्य र अधिकारबारे अन्योलग्रस्त रहेको कारण न्यायिक समितिको काममा गति आउन सकेको छैन । न्यायिक समितिले अदालत सरहको काम गर्ने हो । अदालतसम्म जान नपरोस् भनेर स्थानीय तहमा अदालतले गर्ने काम विकेन्द्रित गरिएको हो । तर
२०७५ जेठ १३ गते आइतवारको प्रतीक दैनिक
प्रदेशको समृद्धिको लागि दलितको समृद्धि आवश्यक –मुख्यमन्त्री राउत
प्रस, वीरगंज, १२ जेठ/ मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दीले समृद्ध प्रदेशको लागि दलितहरूको समृद्धि आवश्यक रहेको बताएका छन्। दलित सरोकार मञ्च सप्तरीको आयोजनामा लहानमा भएको दुई दिवसीय प्रादेशिक दलितसभाको समापन समारोहमा मुख्यमन्त्री राउतले सबै जातजाति समृद्ध नभएसम्म प्रदेश समृद्ध नहुने र प्रदेश समृद्ध नभएसम्म मुलुक समृद्ध नहुने बताए । उनले भेलाबाट जारी घोषणापत्रले दलितको वास्तविक अवस्थालाई उजागर गरेको बताउँदै उनीहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन प्रदेश सरकारले हरसम्भव प्रयत्न गर्ने दाबी गरे । युक्ति मरिकको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले समाजमा लामो समयदेखि भेदभाव, छुवाछूतजस्ता कुरीति व्याप्त रहेको भन्दै सोको निवारणको लागि एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले सङ्घर्षबिना मुलुकमा हालसम्म केही प्राप्ति नभएकाले दलितहरूलाई अधिकारको लागि अग्रसर हुन सुझाव दिए । उनले दलितमा पनि मधेसी दलितको अवस्था एकदमै भयावह रहेको बताउँदै दलितमा रहेको अपार क्षमता प्रदर्शनको लागि आग्रह गरे । राष्ट्रियसभाका सदस्य रामप्रीत पासवानले कम्युनिस्टहरूले रटेको वर्गीय मुक्तिले नेपाली धरातलको
ब्लोदानको बैठक सम्पन्न, विभिन्न समितिहरूको संयोजक चयन
प्रस, वीरगंज, १२ जेठ/ ब्लड डोनर्स एसोसिएसन पर्साको आठौं साधारणसभापछि गठित कार्यसमितिको शनिवार पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ । राणीसती अतिथि सदन वीरगंजमा सम्पन्न बैठक एसोसिएसन पर्साका अध्यक्ष शत्रुघ्न नेपालको अध्यक्ष्Fतामा बसेको थियो । बैठकले विभिन्न समितिहरू गठन गरी संयोजक तोकेको छ । बैठकले राम शर्मा नेपालको संयोजकत्वमा क्लब २५, अरविन्द सिंहको संयोजकत्वमा आकस्मिक रक्तदान क्लब, नीरज साहको संयोजकत्वमा नेगेटिभ रक्तदाता समूह, रोशनी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा महिला रक्तदाता समूह गठन गरेको छ । यसैगरी, अध्यक्ष नेपालको संयोजकत्वमा प्रचारप्रसार समिति र ११ सदस्यीय सचिवालय गठन भएको सचिव अरविन्द सिंहले जानकारी गराएका छन् । बैठकले निशान्त लामिछानेलाई एम्बुलेन्स सञ्चालनको लागि संयोजक तोकेको छ । एसोसिएसनलाई पूर्वसांसद विचारीप्रसाद यादवले १० लाख मूल्य बराबरको एम्बुलेन्स सहयोग गरेका थिए । यसैगरी, रक्त सञ्चार केन्द्र वीरगंजका प्रमुख प्रवीण मानन्धरको संयोजकत्वमा सल्लाहकार समिति गठन भएको छ । ब्लड डोनर्स एसोसिएसनको ३५ सदस्यीय कार्यसमिति गठन भएको र सोमध्ये ३३ प्रतिशतको सहभागितामा सचिवालय गठन
पर्सा जिल्लाका दर्जन गाउँ अन्धकारमा
प्रमोद यादव, रङ्गपुर, १२ जेठ/ पर्सा जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्र चार दिनदेखि अन्धकारमय छ । हावाहुरीले विद्युत् सेवा अवरोध पारेपछि सखुवा प्रसौनी, कौवावन कटैया, देउरवाना, पटेर्वा सुगौली, बागेश्वरी तित्रौना, एकटाँगालगायतका क्षेत्र विद्युत् सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पोखरिया वितरण केन्द्र अन्तर्गतका यी क्षेत्रमा चार दिनदेखि विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा पनि वितरण केन्द्र पोखरियाले मरम्मत सम्भार गर्नेतर्पm कुनै पहल गरेको छैन । स्थानीयवासीले वितरण केन्द्रमा फोन गर्दा फोन नउठाउने र मरम्मत सम्भारतर्पm अहिलेसम्म चासो नदेखाएको गुनासो गरेका छन् ।
राजनीतिक विकासको धरातल
ओमप्रकाश खनाल राजनीति र विकास एकार्कामा अन्तर्निहित छन् । विकासको अर्थ यथास्थितिबाट अग्रगमनतर्पm उन्मुख अवस्था हो । त्यो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सरोकारमा बरोबर लागू हुन्छ । राजनीति विकासको यस्तो आयाम हो, यसले आर्थिक र सामाजिक अवयवहरूसित अटुट सम्बन्ध राख्दछ । राजनीतिक परिदृश्यले विकासका प्रत्येक पक्षलाई प्रभावित तुल्याइराखेको हुन्छ । समाजको आर्थिक र सामाजिक दैनिकीबाट त्यहाँको राजनीतिको प्रभावकारिताको ओज सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सम्भवतः यसै कारण राजनीतिक नेतृत्वलाई जति नै गाली गरे पनि सुधारको अपेक्षा राजनीतिबाटै राखिएको हुन्छ । अहिले हामीले तीव्र आर्थिक विकास र यसको आधारमा दिगो समृद्धिलाई लक्ष्य मानेका छौं । समृद्धिको आलाप र त्यसको अवतरणका उपायहरूको विरोधाभास बहसको अलग विषय भएपनि यसको अनिवार्यतामा किन्तुपरन्तुको खाँचो पर्दैन । यसमा राजनीतिक र वैचारिक आग्रह र दुराग्रहका पहेलीहरू नदेखिएका भने होइनन् । रूपान्तरणको अभीष्ट र उपायमा मतभिन्नता भएपनि आवश्यकतामा आशङ्का जरुरी छैन । समृद्धिका घोषित तानाबानामा धेरै तर्क भइसकेकाले यहाँ त्यसको पुनरावृत्ति नयाँ विषय हुनेछैन । विकासका अवसर
संस्कृति र संस्कारको आधार हो संस्कृत
संस्कृत देववाणी हो अर्थात् देवताहरूले आप्mनो अभिव्यक्तिको लागि जुन भाषाको प्रयोग गर्छन्, त्यो संस्कृत नै हो । यसै कारण संस्कृतलाई देववाणीको रूपमा निरूपित गरिएको छ । संस्कृतमा पूर्वेली संस्कृतिको जरा समाहित छ । यो हाम्रो देशको अतीतको धरोहर हो । संस्कृतमा ऋषिद्वारा अन्वेषित ज्ञानविज्ञानका सम्पूर्ण खजाना छन् । संस्कृतले हामीलाई बोध गराउँछ– हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिता एवं गौरवलाई, साथै हाम्रो समृद्ध इतिहास र संस्कृतिलाई । यसैमा हाम्रFे विरासत सुरक्षित र संरक्षित रहेको छ । संस्कृतको उपेक्ष्Fाले हामीलाई हाम्रै विरासतबाट टाढा गरिदिन्छ, हामीलाई आप्mनै सांस्कृतिक जराबाट काटिदिन्छ र आप्mनो जरा काटिएपछि कुनै कहिल्यै विकसित हुन सकेको छैन । संस्कृतको शाब्दिक अर्थ हो– शुद्ध, परिष्कृत, श्रेष्ठ, सुगढ आदि । संस्कृतको प्रयोगले हामीलाई पवित्रतातर्पm उन्मुख गराउँछ, श्रेष्ठताको बोध गराउँछ र हाम्रो अनगढतालाई सुगढतामा परिणत गर्छ । संस्कृत भाषा अत्यन्तै सूक्ष्म, गम्भीर, व्यापक एवं वैज्ञानिक छ । यसमा संस्कृति, धर्म, अध्यात्म एवं विज्ञानको सूक्ष्म तŒव सन्निहित छ । अज्ञानताको कारण हामी आप्mनै पुरातन एवं समृ